को रोनाका कारण ज्या न गुमाउनेको संख्या १४ पुग्यो : स्याङजामा एक जनाकाे मृ त्यु – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/को रोनाका कारण ज्या न गुमाउनेको संख्या १४ पुग्यो : स्याङजामा एक जनाकाे मृ त्यु
को रोनाका कारण ज्या न गुमाउनेको संख्या १४ पुग्यो : स्याङजामा एक जनाकाे मृ त्यु
स्याङजा – को रोना स ङ्क्रमणका कारण थप एक जनाको ज्या न गएको छ । को रोना स ङ्क्रमण पुष्टि भएपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा आइसोलेशनमा राखिएका स्याङजा वालिङ नगरपालिकाका ६० वर्षका पुरुषको ज्या न गएको गण्डकी प्रदेश को रोना नि यन्त्रण तथा रो कथाम कार्यक्रममा प्रवक्ता डाक्टर विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
योसँगै नेपालमा को रोना स ङ्क्रमणका कारण ज्या न गुमाउनेको संख्या १४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने यसको जानकारी नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिनेछ । नेपालमा अहिलेसम्म ३४ सय ४८ जनामा को रोना पुष्टि भएकोमा ४ सय ६७ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
अहिले पनि १ लाख ७० हजार ७ सय ३२ जना क्वारेन्टीनमा र २९ सय ६८ जना आइसोलेशनमा राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ९६ हजार २ सय ५ जनाको पीसीआर र १ लाख ४५ हजार ४९ जनाको आरडीटी विधिबाट को रोना परीक्षण गरिएको छ ।
७० वर्षमा पहिलो पटक अंगीकृत नागरिकतामा हदम्याद, देशभर ओली सरकारको तारिफ
धुमुर्स सुन्तलीको नयाँ फिल्म हेर्नु भयो? ‘म त मर्छु कि क्या हो’ भयो रिलिज
अनुहारमा कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना किन आउँछ ? उपचार के हो?
काभ्रेमा टिपरको ठक्करबाट दाजुभाइको मृत्यु